यो हप्ता बलिउडको लागी खराब, तिन ओटै फिल्म फ्लप ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > यो हप्ता बलिउडको लागी खराब, तिन ओटै फिल्म फ्लप !
यो हप्ता बलिउडको लागी खराब, तिन ओटै फिल्म फ्लप !
August 07, 2018 Bollywood
बलिउडको लागी यो हप्ता खराब साबीत भएको छ । गत सुक्रबारबाट प्रर्दशन भएका तिन ओटै फिल्म फ्लपको सुचीमा दर्ता भएका छन् ।
रिलिज भएका तिनै ओटा फिल्मले पहिलो दिन ७ करोड सम्मको पनि ब्यापार गर्न सकेका छैनन् ।
सुक्रबारबाट रिलिज भएका तिन ओटा फिल्म मध्य सबै भन्दा धेरै घाटा फन्ने खानलाई लाग्ने भएको छ । किन कि यो अरु दुई भन्दा अलि महंगो फिल्म हो । अनिल कपुर,ऐश्वर्या राय अभिनित फन्ने खानलाई प्रर्दशन पुर्व दर्शकले जसरी लिएका थिए, प्रर्दशन पश्चात त्यो नपाएको गुनासो दर्शकबाट आएको छ ।
त्यसै गरी फिल्म मुल्कले समिक्षकहरुबाट राम्रै तारीफ पाए पनि ब्यापार भने गर्न सकेन । मल्टिप्लेक्समा यो फिल्मले छिट्पुट दर्शक पाए पनि सिंगल थिएटमा भने पुरै सन्नाटा छायको समाचार भारतीय संचार माध्यमहरुले प्रकाशीत गरेका छन् ।
त्यसै गरी अर्को फिल्म कारवां को हालत त्यस्तै भएको छ । यो फिल्मले त झन फन्ने खान र मुल्कले जती पनि ब्यापार गर्न सकेको छैन् । हाल बेलायतमा क्यान्सर रोगको उपचार गराईरहेका अभिनेता ईरफान खान अभिनित कारवां यो हप्ता फ्लप हुने फिल्मको पहिलो नम्बरमा परेको छ ।